‘उमेर लगभग पचपन, पहिरनमा भने बचपन ’ फेरी देखाइन करिश्माले यस्तो जात्रा !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
‘उमेर लगभग पचपन, पहिरनमा भने बचपन ’ फेरी देखाइन करिश्माले यस्तो जात्रा !
काठमाडौँ- करिश्मा मानन्धर उमेरले ५० छेउछाउ पुगिसकिन् । केही तोरीलाहुरे फिल्म संघसंस्थाले उनलाई सदाबहार अभिनेत्रीको पदवी पनि दिइसकेका छन् । १६÷१७ वर्षको उमेरदेखि ५० वर्षसम्म निरन्तर उद्योगमा समय बिताउनु चानचुने उपलब्धि होइन तर समय गुजार्दैमा मान्छे परिपक्व हुँदैन भन्ने कुरा पनि करिश्मालाई नै हेरेर थाहा हुन्छ । उनको न बोलीको ठेगान हुन्छ, न लगाउने लुगाको ।
सार्वजनिक कार्यक्रममा जाँदा अभिनेत्रीले पहिरनमा ख्याल गर्नुपर्छ । अझ पत्रकारका सामु मञ्चमा बस्नु छ भने त झनै सतर्क हुनुपर्छ तर करिश्माको मंगलबारको कार्यक्रममा लगाएको पहिरन हेर्ने सबैले भन्थे, ‘उमेर लगभग पचपन, पहिरनमा भने बचपन ’